02 Aug, 2019 - 00:08	 2019-08-01T19:54:13+00:00 2019-08-02T00:02:47+00:00 0 Views
MAKADII veKwayedza? Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndotsvaga mukadzi ane makore ari pasi peangu. Andida ngaandibate pa0786 606 657. Ndatenda.
Makadii? Ndiri murume ane makore 34, ndotsvagawo mudzimai ane makore 28 – 30. Ngaave anoenda kuchechi. Nhamba dzangu 0774 246 077.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 48, HIV+ nemwana mumwechete uye ndoita mabasa emaoko. Ndotsvagawo murume wekuwanana naye ane makore 49 – 60 ane zvaanoitawo muupenyu, akavimbika asi vane vakadzi kwete. Ngaave ari muHarare, nhare yangu 0713 776 949.
Ndiri murume ane makore 41, ndoda mudzimai anoda imba. Handisi pamushonga asi matsotsi kwete. Ndiri kuMazoe uye ndobatika pa0778 004 529.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 24, ndinotsvagawo murume ane makore 28 – 35. Nhare yangu 0785 211 235.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 30, ndotsvagawo mukadzi anotya Mwari ane makore 26 zvichidzika anopinda church yeZion chete. Anoda ngaandifonere pa0772 208 068.
Makadii? Ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana vaviri, ndinodawo anofarira zvechivanhu. Anoda ngaandibate pa0775 969 475.
Makadii vechirongwa? Ndotsvakavo musikana wekuroora ari pachokwadi uye asiri pachirongwa ane makore 18 – 21. Ndiri mukomana ane makore 23, andifarira ngaandibate apa 0712 589 749.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 46 nevana vatatu, ndinotsvakawo shamwarirume. Ndingada hangu vanotangira pamakore 50, ndinobatika apa 0716 721 851.
Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvaga mukadzi ane makore 25 zvichidzika. Anoda ngaandibate pa0716 072 649.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 2, ndotsvagawo murume ane makore 40 kusvika 55 anotya Mwari. Ini ndozvishandira, anenge andifarira anondibata pa0712 402 136.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 42, ndotsvagawo shamwarirume inoda zvemba. Nhare yangu 0774 123 096.
Makadiiko veKwayedza? Ndinotsvagawo mudzimai ane makore 20 kusvika 28 ari negative. Ndobatika pa0783 010 466.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai ane makore 25 nemwana 1. Ndinodawo murume ane makore 26 kusvika 36. Ndibatei pa0784 140 258.
Ndiri musikana ane makore 25, ndinotsvagawo mukomana ane makore 28 – 33. Ndinotenda chose Kwayedza. Nhare yangu 0786 735 090.
Makadii zvenyu veTishamwaridzane? Ini ndiri murume ane makore 32 nevana 2, ndogara nekushandawo muHarare. Ndotsvagawo mukadzi akarongeka asiri pamushonga seniwo, anonamata uye akanakawo pachimiro. Ngaave anogeza ane mwana mumwe zvake uye ane makore 19 – 25. Vanoda kutamba kwete, andida ngaandibatewo pa0773 838 527.
Ndiri murume ane makore 40 nemwana 1.
Ndinotsvagawo mudzimai ane mwana wake ane makore 35 – 38. Nhamba dzangu 0777 539 949.
Ndiri murume ane vana 2, ndinotsvakawo mudzimai wekushamwaridzana naye asiri pamushonga. Anondibata pa0776 861 705.
Makadii? Ndiri murume ane makore 41 nevana 2, ndotsvaga mudzimai ane mwana 1. Ndiri pamushonga, nhare yangu 0776936278.
Ndiri kutsvagawo mukadzi wekuroora, ndine makore 39. Anoda ngaandibate pa0774 305 071, zvakawanda tozotaura.
Ndiri mukomana ane makore 26, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 – 26. Ndinoshanda muHarare, ada nezvangu anondibata pa0785 134 658.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 44 uye ndiri kudawo murume wekuchembedzana naye asiri pamushonga. Nhamba dzangu idzo 0773 364 675.
Ndiri murume ane makore 33 ekuberekwa, handisi pamushonga uye ndinodawo mudzimai wekuvaka naye musha. Ndine mwana mumwe, zvakawanda totaura pa0774 792 487. Ndatenda hangu.
Makadii hama? Ndotsvagawo chimhandara, ndiri mukomana ane makore 25 uye ndodawo ane makore 18 kusvika 25. Anoda ngaandibate pa0771 133 228.
Makadii? Ndiri kutsvagawo mukomana ane makore 24 – 27 anoshanda. Ndine makore 22, nhamba dzangu 0771 731 186. Ndatenda.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 43 ndotsvagawo mudzimai ari pachokwadi anoda kuti tigarisane ane makore 25 – 35. Ngaave anotya Mwari, nhare yangu 0785 085 237.
Ndambonyorera kakawanda kuTishamwaridzane asi handisati ndamboshambadzwawo. Ndiri murume ane makore 30, ndodawo mukadzi ane makore ari pasi peangu. Ngaave anoshanda, ini ndoshanda. Ndinoda chero ane mwana 1 kana 2. Ndobatika pa0772 483 252.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 38 nevana 2, HIV negative uye ndotsvakawo murume ane makore 42 – 52 ari negative seni uye akasunuguka kunotesitiwa ropa. Ngaave ane rudo uye anonamata asi varume vevanhu kwete. Andifarira anondibata pa0717 777 737.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 nemwana 1. Ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye ave kuda zvekuroora, ndodawo ane utsanana, ane rudo anotya Mwari uye anoshanda. Asi ini handishande hangu, matsotsi kwete. Andifarira ngaandibate pa0714 936 766.
Kwaziwai vedare. Ndadzoka zvekare, handisati ndawana murume anoda zvekuroora. Ndiri kutsvaga akavimbika, anotya Mwari uye anonamata. Ndiri mudzimai ane makore 30 nevana vaviri. Nhamba dzangu 0716 097 004, ndogara kuChinhoyi kumusha. Ndatenda.
Makadini veKwayedza? Ndanzwa nekunyorera shambadzo yangu haisi kubuda. Ndiri mukomana ane makore 26, ndinodawo musikana chero ane mwana wake akanaka chiso nemoyo uye anotya Mwari. Ndinoda anondipa rudo rwemachokwadi ane makore 18 kusvika 27 asi vakadzi vevanhu kwete. Andifarira andida nhare yangu 0712 493 547, ngaave anogara muHarare.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 26, ndinoda musikana ave kuda zvemba ari pachokwadi. Nhare yangu 0775 972 744.
Makadini? Ini ndiri mukadzi ane makore 31, ndotsvagawo murume ane makore 35 – 44 ari pachokwadi uye asina mukadzi ane vana vake. Nhamba dzangu 0734 310 544.
Ndiri murume ane makore 40 nevana 2, ndotsvagawo mukadzi wekugara naye ane makore 26 – 36. Ndiri muHarare, andida ngaandibate pa0737 169 646.
Makadii veTishamwaridzane? Ndakambonyorera ndakasangana nematsotsi, ndiri murume ane makore 43 nemwana 1. Ndinodawo mudzimai ane makore kutangira 34 ari pamushonga anogamuchira zvaari sezvandiriwo.Vakadzi vevanhu nevanoda kutamba kwete. Ndinobatika pa0718 168 872.
Makadi zvenyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 20 nevana 2, ndinotsvagawo murume ane makore 25 kusvika 30 asina chirwere nekuti ini handina. Ndinoda anonamata uye anoshanda. Andifarira ngaandibate apa 0716 585 667.
Ndotsvagawo mudzimai ari serious ane makore 28 – 35. Ini ndine 46, ndiri negative uye ndiri kwaMutare. Nhare yangu 0782 980 649.
Makadii veKwayedza? Ini ndinofara chaizvo, ndiri murume mutsvuku, ndine makore 37 uye ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari serious. Nhamba dzenhare 0715 943 840.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 25 ndotsvagawo musikana ane makore 19 – 23. Andifarira anondibata pa0713 126 938.
Ndiri murume ane makore 40 nevana 3, ndinotsvagawo mukadzi anoda zvekuvaka musha anotya Mwari uye anoyevedza kutarisa. Ngaave mupositori kubva pamakore 25 kusvika 35 akasunguka uye ane vana 2 kana 1. Andifarira ngaandibate pa0713 766 629.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 27 uye ndodawo musikana ane makore 20 – 24 ari pachokwadi asi matsotsi musafona. Nhare yangu 0735 254 359.
Makadii henyu veKwayedza? Ndiri murume ane mwana 1 uye ndinotsvagawo mukadzi wekushamwaridzana naye ane mwana 1 kana 2. Andidawo anondibata pa0775 678 607.
Ndiri mudzimai ane makore 39 uye ndine vana vaviri. Ndodawo murume ari pamushonga seni asi varume vevanhu kwete. Adawo nezvangu ndibate apa 0717 923 165.
Ndiri mukadzi ane makore 42, ndinotsvaga murume anondiroora ane makore 45 – 50 anonamata uye ari HIV negative. Nhare yangu 0714 047 199.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana ane makore 16 kusvika 26 ari serious. Nhamba dzangu idzi 0784 461 057.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvagawo musikana anoda kuroorwa uye ngaave avewo nezvaanoita. Anoda anondibata pa0712 732 848.
Ndiri mudzimai ane makore 39, ndotsvagawo murume ari pachokwadi. Ndiri muHarare, vanoda kutamba neni kwete. Ndakambonyorera, vane vakadzi vavo kwete. Nhare yangu 0715 737 413.
Makadini veKwayedza? Ini ndiri mudzimai wemakore 39, ndiri pamushonga uye ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ari pamushongawo seni ane makore ari pamusoro peangu kusvika pa52. Andida nhamba dzangu ndeidzi 0774 859 469.
Ndinodawo musikana ari serious neni. Ndiri mukomana ane makore 25, ndodawo musikana ane makore 18 – 22. Utano bhoo zvokuti, nhamba dzangu 0771 745 961.